सपनामा नाग देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस् | snake in dream
ramkrishna April 29, 2021	snake in dreamसपनामा धेरै सर्प देख्नुसपनामा नाग देख्नु
सर्प र मानवको सम्बन्ध मानव सृष्टिको प्रारम्भिक कालदेखिनै चलिआएको छ। सर्पसंग सम्बन्धित कथाहरु, हिन्दु धर्मशास्त्र तथा पौराणिक कथाहरुमा समावेश भएका छन्। हिन्दु शास्त्र अनुसार सर्पलाई पूजा योग्य जनावर मान्ने गरिन्छ र हरेक वर्ष नागपंचमीमा विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ।
भगवान शिवले आफ्नो गलामा साँप बेरेको समेत देख्न सकिन्छ ,जुन हेर्दा हामीले साँपको धार्मिक महत्व समेत बुझ्न सक्छौ। यदि हामीले बाटोमा हिंड्दा वा केही कामको शिलशिलामा सर्प देख्दा डरका साथै शरिरबाट पसिना छुट्ने गर्छ तर यसलाई सपनीमा देख्दा, जीवनमा के कस्तो फाइदा – बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईहरुलाई बताउन जाँदै छौँ।
यदि तपाईले सपनीमा कुनै मन्दिरमा आँखा खोलेको साँप देख्नुभयो भने यो तपाईको लागि शुभ संकेत हुने गर्छ। सपनीमा यस्तो अवस्थामा साँप देखेमा तपाईले भबिष्यमा सोचेका सम्पूर्ण कार्यहरु सिद्द हुँदै जाने छन्।
यदि तपाईले सपनीमा कुनै रुखमा चढ्न लागेको साँप देख्नुभयो भने यो पनि तपाईको लागि शुभ संकेत हुन सक्छ। सपनीको यस संकेतले निकट भविष्यमै केहि शुभ कार्य सम्पन्न हुने संकेत गरेको हुन्छ। यसले तपाईको जागिरमा पदोन्नति हुने समेत संकेत गरेको हुन्छ।
यदि सपनीमा शिवलिङ्ग माथि साँप चढेको देखेमा निकैनै शुभ मान्ने गरिन्छ। यस्तो सपनीको संकेतले तपाईको जीवनमा अधुरा रहेका कार्यहरु छन् भने भगवान शिव प्रसन्न भई ती कार्यहरु सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने मान्यता रहेको छ।
यदि कुनै गरिब व्यक्तिले साँप रुखबाट झरेको सपनी देख्यो भने यो शुभ संकेत मान्ने गरिन्छ। यसलाई अत्यधिक धन प्राप्तिको संकेत मान्ने गरिन्छ।
यदि तपाई कुनै विशेष कार्यको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र बाटोमा साँपले बाटो काट्यो भने अत्यन्तै शुभ मान्ने गरिन्छ। यसले आफू हिंडेको कम सम्पन्न हुने संकेत गर्दछ।
सपनीमा सेतो सर्प देख्दा अत्यन्तै शुभ हुनेगर्छ र यसलाई धनको प्रतिकको रुपमा लिने गरिन्छ।
*यदि सपनीमा मरेको साँप देखेमा यसलाई अशुभ मान्ने गरिन्छ। यो निकट भविष्यमा हुने संकटको सूचक हो। यस्तो अशुभ प्रभाबबाट बाँच्नका लागि कुनै महिनाको ५ वटा सोमबार शिवमन्दिरमा गई शिवलिङ्गमा काँचो दुध अर्पण गर्नुपर्छ।
यदि तपाई घरबाट बाहिर निस्किने समयमा साँपले बाटो काट्यो भने साबधान रहन आवश्यक हुन्छ। यस्तो बेला आफू घरबाट निस्किदा सोचेको कार्य सम्पन्न नहुन सक्छ त्यसैले पुन:घर फर्केर शिव भगवानको पूजा गरेर मात्र हिंड्दा शुभ हुने गर्छ।
यदि सपनीमा नाग -नगिन जोडीको प्रेम देखेमा अशुभको सूचक मानिन्छ। यो ठुलो मात्रामा हानी नोक्सानी गर्ने संकेत हो।
Previous Previous post: सपनामा सर्पले टोकेको देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस् | sapanama sarpale tokeko dekhnu
Next Next post: सपनामा बादर देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस् | Monkey in dream